Nezvedu »Saiti yekudzidza yeGerman ine zvidzidzo zveGerman
I www.almancax.co, Dzidzo yeGerman muTurkey kubvira 2006 uye nhasi maGerman maVisa, maPermit anoshanda seSession uye Working solution masevhisi nezve matambudziko akasangana neTurkey kuGerman.
Iwe unogona kuwana iyo ruzivo iwe rwaunoda kune rwekunze mutauro mutauro mune almancax.
Pakutanga kwema2000, apo iyo asynchronous dzidzo system yakanga ichangobva kukurukurwa nekuitwa, sealmancax, tiri kuita dzidzo yekune dzimwe nyika neiyi system kekutanga munyika medu. Iyi dzidzo system, umo kutora chikamu kunopararira nekufamba kwenguva, kunoparadzanisa vadzidzi kubva kumatambudziko enguva nenzvimbo. Inoitendera kuti vatevedze hurukuro uye vatore chikamu muhurukuro chero nguva uye chero kwavanoda. Almancax maforamu akave akanyatso gadzirirwa nhaurirano dzakadai nekugovana.
Uyezve, hausi wega uri kuita zvese izvi; kwete chete kubva kumakona mana eTurkey, kubva kunyika dzese muEurope, akasiyana mapoinzi epasi, achigovana newe chinangwa chimwe chete, zviuru zveTurkey zvakare zviri kudzidza chiGerman pano, zvinogadzirisa matambudziko ari pano.
Uye zvakare, iwe unogona kuwana ruzivo nezveGerman mune yedu foramu, tsvaga ruzivo nezve dzidzo, undergraduate, akapedza kudzidza, tenzi, doctorate mikana kuGerman, gadzirira bvunzo dzakadai seA1, A2, uye uwane ruzivo kubva kushamwari dzakambotora ndokuhwina bvunzo idzi. mapasipoti kune avo vari kuda kuenda, ma visa maitiro, kubatanidzwazve kwemhuri, kutora zvikamu, mvumo yekushanda kuGerman, vachishandisa rezinesi kubva kuTurkey, maitiro evhiza evashanyi anogona kutora ruzivo mune imwe nyaya yekuenda semudzidzi kuGerman uye kubva pane zvakaitika yararlanabilirsiniz.y ku Unogona kugovana zviitiko zvako pane izvi nyaya uye nekupa ruzivo rwakakosha kune vanotanga.
Kwete chete isu tinopa ruzivo pamusoro pemitauro yekune dzimwe nyika kune vatori vechikamu vemusangano, isu tinovabatsirawo nezvematambudziko avanotarisana nawo munyika dzeEurope (kunyanya Germany). uye ndedzipi tsika tsika, mibvunzo yakawanda nezvinetso zvinokurukurwawo mune almancax maforamu.